Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware? Torolàlana haingana sy mora | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware? Torolàlana haingana sy mora
Salama namana avy FromLinux, rehefa elaela tsy namoaka na inona na inona, eto indray izy ireo manana ahy. Anio dia hasehoko anao ny fomba fanomanana ny Slackware antsika aorian'ny fametrahana azy.
1 Maninona no mampiasa Slackware?
2 Aiza no ampidiriko?
3 Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware?
3.1 Manampia mpampiasa vaovao:
3.2 Alefaso sudo amin'ny mpampiasa anay:
3.3 Adikao amin'ny Espaniôla ny rafitra:
3.4 Ampifanaraho ireo tahiry:
3.5 Rafitra fanavaozana:
3.6 Atombohy mivantana amin'ny rafitra maoderina ny rafitra:
3.7 Ovay ny miandry miandry roa minitra ka hatramin'ny dimy segondra:
3.8 Ahoana ny fametrahana fonosana amin'ny alàlan'ny sbopkg…?
3.9 Raha mampiasa kahie isika:
3.11 Fitaovana famatrarana:
3.13 Raha mampiasa rafitra 64 bit:
3.16 Adikao Libreoffice:
3.23 Lisitry ny mpandefa vaovao ho an'ny KDE raha liana ianao (toy ny amin'ny sary):
Maninona no mampiasa Slackware?
Fantatry ny rehetra fa dimy volana lasa izay no nanaovako ny fanovana Debian a openSUSE amin'ny masiniko rehetra, ao anatin'izany ny mpizara. Ankehitriny dia nanao toy ny nolazaiko tamin'ny tenako ihany aho .. Raha misokatra ny OpenSUSE SUSE ary ity dia avy amin'ny Slackware .. Hanao ahoana ny Slackware? Ary nanapa-kevitra ny hanandrana aho :).
Izany no fahafinaretako fa tsy nahafehy ny fihetsem-po aho ary na dia tokony hilalao kely amin'ny horonan-taratasy aza ny olona slackpkg, installpkg, sbopkg ary ny tranokalan Slackbuilds, mazava fa mendrika izany satria nahatratra fampisehoana izay tsy ho hitantsika akory aza Debian, Fedora, RHEL, SUSE, andohalamboSns ...
Ny distro tokana mampiseho ny zava-bitany dia Gentoo ary tsy manana fotoana fanangonana sy fametrahana lava be izany, ary Slackware kosa dia apetraka ao anatin'ny 20 minitra (miankina amin'ny rindrambaiko nofidintsika): D.
Ny tantarako ... ny tantaran'i Debian, rain'ny Linux, izay nolokoiko nandritra ny taona maro ary nandalovako ireo rahalahy RHEL sy ny taranany, ary avy eo dia zanakavavin'ny sampana mahaleo tena iray nisokatra SUSE an'ny renin'i SUSE izay nisokatra tamiko lalana mankany amin'ny tontolo mbola tsy nisy toy izany. Ny renin'ny fizarana Linux .. Slackware: D.
Làlana lavareny no nitondra ahy ho any amin'ny tontolo antsoina hoe Linux tena izy. Tontolo iray izay mitovy be amin'ny Unix. Tontolo iray izay anangonana ireo fonosana. Tontolo iray izay tsy apetraka ny fonosana fako rehefa te-hametraka rindranasa satria ny fiankinan'izy ireo ihany no ilaintsika. Tontolon'ny fitoniana. Tontolo tsy misy versiontitis sy distrotitis.
Na eo aza izany dia misy io distro io, havaozina tsindraindray .. Mba hanomezana ohatra iray: Slackware 14.1 Nivoaka tamin'ny 7.11.2013. Fantatsika rehetra ny zava-nitranga tato ho ato niaraka tamin'ny OpenSSL ary fantatsika rehetra fa ireo distro lehibe dia nametaka ny kinova OpenSSL. Raha ny momba an'i Debian na RHEL dia nasian'izy ireo ny kinova 1.0.1e. Slackware 14.1 Nivoaka niaraka tamin'ity kinova ity ihany koa izy, saingy rehefa nahamarika ity bibikely ity dia naleony nametraka ny kinova 1.0.1g mivantana tao amin'ilay sampana miorina. Ity distro ity dia misafidy ny hametraka ilay kinova ofisialy fa tsy hanao patches mety hiteraka elanelana misimisy kokoa.
Izay no antony nitahirizako ny Slackware tamin'ny milina sy mpizara rehetra ahy ary mikasa ny hijanona eto aho. Nandritra ireo volana ireo dia nandramako mafy ity distro ity hahafantarana raha marina ity dingana ity. Ary ny valiny dia eny .. Reny eny
. Nandresy ahy ity distro ity, nahasarika ahy tanteraka ary tsy isalasalana fa io no zavatra tsara indrindra notsapako. Tsy manana teny hafa aho.
Raha tsy misy resaka intsony, sary sasantsasany amin'ny rafitro:
Aiza no ampidiriko?
Tsy hiditra amin'ny fomba fanaovana ny fametrahana azy aho satria tsotra izany. Izy io dia mpiorina maody an-tsoratra, fa kosa mitarika antsika tsikelikely.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware?
Manampia mpampiasa vaovao:
Mandritra ny dinika izay miseho rehefa miseho ity:
tsindrio ny bokotra miakatra eo amin'ny kitendry ary eo amin'ny faran'ny tsipika vondrona izay vita ho azy miaraka amin'ilay fanalahidy voalaza hoe: kodia ary tsindrio miditra.
Alefaso sudo amin'ny mpampiasa anay:
Izahay dia mitahiry ny rakitra amin'ny CTRL + O ary manidy amin'ny CTRL + X.
Adikao amin'ny Espaniôla ny rafitra:
Tanisao ireo fiteny rehetra misy: locale -a
Fanondranana soloina LANG = en_US:
Soloy setenv LANG en_US:
Ampifanaraho ireo tahiry:
Aza adino ny rohin'i Portugal satria tsy manana repos i Espana:
slackpkg vaovao farany slackpkg fanavaozana gpg slackpkg fanavaozana-rehetra
Atombohy mivantana amin'ny rafitra maoderina ny rafitra:
Change id: 3: initdefault: ho:
Ovay ny miandry miandry roa minitra ka hatramin'ny dimy segondra:
Soloy ny ora famaranana = 2000 amin'ny:
Mametraka fitaovana tena ilaina izahay izao, izay hanangona sy hametraka ireo programa ho anay:
Manavao ny tahiry momba ny programa misy ao amin'ny Slackbuilds.org izahay:
Ahoana ny fametrahana fonosana amin'ny alàlan'ny sbopkg…?
Manamarina izahay fa misy ilay fonosana ao amin'ny http://slackbuilds.org/ ary manamarika ireo fiankinan-doha rehetra.
Mihazakazaha fotsiny: sbopkg - "mahia" (Ohatra iray amin'ny fametrahana Slim). Aza adino fa alohan'ny hametrahana ilay fonosana tiana hapetraka dia apetrantsika daholo ny fiankinan-doha aminy. Mametraka ireo programa fototra izahay izao:
Raha mampiasa kahie isika:
sbopkg -i "orc texi2html libebml libmp4v2 libcuefile libreplaygain lame x264 a52dec faad2 speex twolame lua lua portaudio libass libavc1394 libdc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatroska libmpd2 libspack
Raha mampiasa rafitra 32 bit:
Ampidino ny jdk avy amin'ny oracle amin'ny kinova 7u51 (jdk-7u51-linux-i586.tar.gz):
Ampidininay ny slack build:
Apetaho amin'ny jdk folder ilay rakitra jdk-7u51-linux-i586.tar.gz ao amin'ny folder jdk izay navoakanay teo aloha ary ampandehano ny script:
Ity dia hamorona fonosana azo apetraka toy izao (hitanao hatrany ny làlana sy ny anaran'ny fonosana novokarina) ary apetrakay miaraka amin'ny:
Raha mampiasa rafitra 64 bit:
Ampidino ny jdk avy amin'ny oracle amin'ny kinova 7u51 (jdk-7u51-linux-x64.tar.gz):
Apetaho amin'ny jdk folder ilay rakitra jdk-7u51-linux-x64.tar.gz tao amin'ny folder jdk izay navoakanay teo aloha ary ampandehano ny script:
Ampidininay avy amin'ny libreoffice-helppack sy libreoffice-langpack ireo slackbuilds:
Manala zipay ireo rakitra alaina izahay.
Ampidininay ireo fonosana libreoffice:
Mametaka ireo fisie ireo izahay nefa tsy mamoaka azy ireo amin'ny lahatahiry slackbuid mifanaraka aminy ary manatanteraka ny script amin'ny roa:
Ary apetrakay ireo fonosana novokarina (hitanao hatrany ny làlana sy ny anaran'ny fonosana novokarina):
Unzip ary raha tsy apetraka dia azontsika ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fonosana teamviewer ao amin'ity fampirimana ity.
Izahay dia manampy ny fonosana amin'ny lisitra fanombohana:
Manoratra izany izahay amin'ny farany:
raha [-x /etc/init.d/ufw]; avy eo /etc/init.d/ufw manomboka fi
Izahay mamela ny firewall:
Avelantsika ny ssh raha mampiasa azy isika:
Lisitry ny mpandefa vaovao ho an'ny KDE raha liana ianao (toy ny amin'ny sary):
Ary voila .. Amin'izany dia mahazo rafitra voaomana amin'ny fampiasana ankapobeny izy ireo: D. Ary hitanao fa tsy dia sarotra araka ny mety ho izy. Miarahaba anao linuxeros ary aza adino ny maneho hevitra :).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Slackware? Torolàlana haingana sy mora
96 hevitra, avelao ny anao
Ary (vector linux) dia toy ny tsiron'ny Slackware
Valio amin'i KARLOZ
Eny fa tsy mitovy 😀
Sendra nanao veloma aho =) ...
Ny Slackware dia tsy hanana ray fa azoko an-tsaina ao anatin'ny volana vitsivitsy fa nanandrana "linux hatrany am-boalohany" ianao, ary nanova ny milina sy mpizara rehetra anao ... miaraka amin'ny torolàlana mifandraika 😉
Tsy azoko an-tsaina ny manao zavatra adala toy izany: D. Nieritreritra an'izany aho teo anelanelan'ny Slackware sy Gentoo. Niala tamin'ny raim-pianakaviana Debian nankany amin'ny reny Slackware aho ary eto dia tena mijanona aho: D.
Topazo maso ny fotoana fanohanan'ny Slackware:
Heveriko fa mety raha ampiasaina amin'ny famokarana.
Debian ny rafitra miasa manaja sy mendri-kaja izay tsy isalasalako fa indray andro any dia hoesorina amin'ny solosainako ... Ny hevitra fametrahana slackware koa dia tonga tato an-tsaiko taloha, fa rehefa nanandrana aho dia tamin'ny fotoana nataoko izany. tsy mahatakatra zavatra vitsivitsy ary nanjary sarotra tamiko ny lalana ka arao ny fandidiana ... Araka ny voalazanao, Gentoo dia mandray ("kely") fa ho avy eo ...
Na izany na tsy izany, ny fanehoan-kevitra dia tsara momba ny slackware, manantena aho fa hanohy hamaky bebe kokoa momba azy io sy ireo fizotrany sarotra miaraka amin'ireo vahaolana izay miseho eny an-dàlana ...
Ho ela velona ny fahalalahana… !!!
Slackware dia fizarana izay nieritreretako ny hametahana imbetsaka, namaky ireo fanehoan-kevitra aho fa io no milamina indrindra (saingy tena izy). Mazava ho azy fa ho gaga aho raha toa ka vitsy ny bibikely noho ny CentOS, izay nanome olana 0 tamiko tamin'ny fotoana nanandramako azy.
Na izany aza, niverina tamin'io zavatra io foana aho: parcels ivelany. Ny antony namotsoran'i Debian tranon'omby efa antitra dia tsy antony tsy fahita firy, satria ny fahalalahan'ny GNU / Linux miaraka amin'ireo tranomboky iraisampirenena dia miteraka fifandonana eo amin'ny programa ary ilaina ny fitsapana sy ny fotoana hahitana izany. Slackware azo antoka fa miasa tsara miaraka amin'ny fonosana ofisialy saingy tsy ofisialy ny Slackbuilds, fonosana izay mety mbola tsy nosedraina tsara izy ireo ary rehefa tonga ny fotoana dia mety mikatona izy ireo. Raha na dia ao Debian aza dia nitranga tamiko tamin'ny fonosana marobe, tsy matoky aho fa tsy hanao izany i Slackbuilds. Etsy ankilany, miaraka amin'ny parsela ivelany dia misy ihany koa ny olana ara-piarovana: raha misy lesoka hita, hanavao azy ve izy ireo? Azo inoana fa eny, saingy misy foana ireo programa ilaozana (na avelan'ny uploaders), any dia tsy dia tsara loatra. Izy io dia zavatra iray nijaliako tao amin'ny CentOS: tsy misy olana aorian'ny fampiasako herinandro (ny distro IHANY izay nitranga tamiko ny zavatra toy izao ary lazaiko izany, miaraka amin'ny hafa rehetra dia nisy zavatra nipoitra foana), saingy tonga izao ny fotoana hisarihana ireo tahiry ivelany misy anao Ny rafitra afovoany dia matanjaka tokoa fa ny rindranasa izay hampiasainao tsy misy olona dia manome antoka anao na inona na inona. Ny Slackware ohatra dia tsy manana na inona na inona virtoaly (LXC farafaharatsiny), mila mandeha any amin'ny Slackbuilds ianao hahazoana azy.
Tena mendrika ny hamela an'i Debian any aoriana ve ianao ary hanao ny fanovana amin'ny fanaovana sorona toy izany, petercheco?
Salama OtakuLogan ary misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra mahavokatra: D. Manaiky aho fa ny fiorenan'ny Debian na RHEL / CentOS dia avo lenta tokoa. Nandalo ireo distro roa lazainao aho ary afaka miteny aho fa raha mbola mampiasa ny repo ofisialy ianao dia mino fa tsy hisy hitranga aminao ny 99%. Mazava ho azy, raha apetrakao ao amin'ny CentOS-nao ny toeran'ny rpmfusion, adobe ary epel dia miova be ny raharaha. Tsy noho ny fonosana hapetrak'ireto repos ireto ihany, fa noho ny fonosana junk izay apetrak'izy ireo ho anao sy ireo banga izay mety misy azy ireo.
Miaraka amin'ny slackbuilds dia hafa kely ny raharaha satria fantatrao izay fonosana sy fiankinan-doha hapetrakao ary tsy hametraka fonosana izay tsy ilaina akory ianao hanatanterahana ny asan'ny rindrambaiko tianao apetraka amin'ny slackbuilds. Aza adino ihany koa fa slackbuilds dia miasa miaraka amin'ny kaody loharano ary manangona ny fonosana amin'ny rafitrao. Tokony ho ao an-tsainao ihany koa fa ny kinova fonosana sy fonosana voasedra ihany no avoaka amin'ny slackbuilds. Ohatra: VLC amin'ny pejy ofisialy dia misy amin'ny kinova 2.1.3 raha amin'ny slackbuilds dia 2.1.1 ny kinova. Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny rafitra .. Raha mihevitra ianao fa voaangona ho an'ny solosainao ireo fonosana ireo, dia mampihena hatramin'ny 0 ny tsy fandriam-pahaleman'ny solo-sainao io na amin'ny lafiny inona na amin'ny tranga inona na tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny programa fotsiny ny tsy filaminana. Manoro hevitra anao aho mba hanandrana Virtualbox kely ary ho hitanao izay tombony ananan'ity distro ity.
Izaho koa milaza aminao fa ny tenako dia nitovy hevitra taminao talohan'ny nanandramako Slackware ho ahy: D.
Miarahaba anao avy amin'ny Linux ary manantena aho fa efa voavaliko ny fanontanianao 🙂
Mandrosoa, nahatonga ahy te hiverina hiverin-tena io.
Te-hametraka fiankinan-doha aho ary hikodiadia ny slackware, fa tsy ny zavatra rehetra akory mety haha. Fa aleoko ny slackware toy izay ny debian na ny gentoo.
Raha hiverenana dia voalaza fa .. Slackware dia manana ny sampana ankehitriny ary efa anananao mihodina 🙂
Ho an'ny misy Arch, mihodina izy ary miaraka amin'ny ABS sy PKGbuilds dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny Slackbuilds ianao ary raha tianao amin'ny baiko "makepkg -s" dia hamaha ho azy ny fiankinan-doha aho.
Amin'izay hitako dia aleoko ny Arch Linux, raha tsy hoe afaka milaza amiko ny tombony azonao amin'ny Slackware momba ny Arch ianao, satria tsy mbola hitako hatreto
samy manana ny fahasoavany…. rehefa reraky ny iray ianao dia mifamadika amin'ny iray hafa sns
Mampiasa windows 7 ianao ary tsy mihodina izy io haha
Mahaliana tokoa ny valinteninao ry petercheco. Raisiko an-tsaina izany, farafaharatsiny mba hanarahako ny torolalanao hizaha toetra azy io. Misaotra anao!
Torolàlana tena tsara, tsy maintsy andramantsika izany. Avy amin'izay nolazainao dia mieritreritra aho fa alohan'ny hametrahana fonosana dia tsy maintsy jerenao ny fiankinan-doha ka rehefa apetrakao ireo fonosana dia tsy maintsy apetrakao ny fiankinan-doha. Tsy maintsy mijery akaiky aho. Toa fomban-tsaribakely kokoa noho ny linux ny ahy ... Misaotra 🙂
Tokoa. Tokony hametraka ny fiankinan-doha rehetra alohan'ny programa ianao. Ny tombony dia amin'ny sbopkg hatramin'ny nametrahanao azy rehetra .. Ohatra: Jereo ny baiko hametraka VLC. Ny zava-drehetra alohan'ny vlc (amin'ny baiko mitovy) dia miankina amin'ny VLC na amin'ny programa ilain'ny VLC. Raha atao teny hafa, dia ilazanao amin'ny sbopkg amin'ny baiko rehetra ny fiankinan-doha sy ny programa farany amin'ny farany ary mikarakara ny fisintomana, manangona ary mametraka ny fonosana tsirairay avy izy. Mandeha mifono fonosana mandra-pahatapitry ny zavatra rehetra. Ary raha Slackware dia manakaiky ny Unix 😀
Mila arahabaina ianao satria mampiasa Slackware ary satria saika tsy misy lahatsoratra avy any aminy. Na dia toa ahy aza fa nanitatra tamin'ny fampisehoana ianao. Amin'ny teôria dia tsy maintsy misy bebe kokoa, fa tsy zavatra mahavariana. Ary lazaiko aminao fa nampiasa Arch sy Slackware aho niaraka tamin'izay. Ny toerana mampiavaka azy dia ao Gentoo, indrindra fa ny KDE no gaga ahy.
Na dia azoko aza, nanana izany fahatsapana fanatsarana bebe kokoa izany koa aho ary tena tsara. Saingy tsy mifanaraka amin'ny fombako Slackware io, nankaleo aho ary nanadino izany, fa aleoko kokoa ny fomba fanaovan-javatra rehetra ao Gentoo.
Mora kokoa amiko ny mampiasa Gentoo, mety mila fandinihana kely kokoa izy io amin'ny fampiasana azy, saingy io no kely indrindra amin'izany. Raha tsy mandinika ny fametrahana azy isika.
Misaotra betsaka: D. Miarahaba anao koa aho tamin'ny fampiasanao ny Gentoo ary ekeko fa mora be ny mitazona rehefa napetraka noho ny portage: D. Manintona ahy manokana i Gentoo fa miadana kosa ny fametrahana Gentoo ary tsy milaza aminao aho na inona na inona hanangonana ny KDE rehetra mila manam-paharetana be ianao: D. Mikasika ny fampisehoana dia tsy afaka manome hevitra aho satria nifantina fonosana amin'ny tanana nandritra ny fametrahana azy, noho izany dia tsy manana afa-tsy ireo rindranasa izay tiako hananana ary amin'ny tontolo iainana dia nametraka ny KDE fotsiny aho. Ny fahatsapana ananako ao amin'ny solosaina finday misy fotony sy gig gig dia ny Slackware miaraka amin'ny KDE dia mihazakazaka haingana be ary ny fahasamihafan'ity distro ity miaraka amin'i Debian, Arch, openSUSE dia tena manamarika ahy: D. Heveriko fa miankina amin'ny hardware fa tsy maintsy tsikaritry ny olona ny fahasamihafan'ny distro tsirairay.
Misaotra anao koa. Rehefa mieritreritra an'izany aho, ny fametrahana minimal KDE ao amin'ny Debian na ny Arch dia manery anao hametraka fonosana tsy maintsy atao. Etsy ankilany, amin'ny Slackware azonao atao ny tsy miraharaha ny maro satria tsy mitaky azy ireo izany. Mitovy amin'ny Gentoo, manana fametrahana KDE 3 samihafa izy, ny iray feno, ny iray fototra ary ny superlight iray tsy misy fanampim-panazavana tsy ilaina. Izay nofidiko ny farany. Tena tsara izany.
Ao amin'ny PC-ko misy an'i Debian Wheezy misy RAM 1GB sy Pentium D an'ny 2.8 Ghz, voalohany, nametraka ny fonosana KDE-Meta aho nisafidy ny tena fototra iasa; Avy eo, nanomboka nianjera tamin'ny GNOME 3.4 ny tenany aho teo amin'ny birao KDE, ary tena mahazo aina amin'ny KDE-nao amin'ny PC-birao aho.
Miaraka amin'ny Slackware, nandramako ny zava-bitany tamin'ny milina virtoaly sy ny KDE, miaraka amin'ireo singa rehetra ao aminy, dia mihazakazaka toy ny landy. Distro GNU / Linux mahafinaritra izany ary zavatra tsy hanenenako manandrana.
Ary koa, Slackpkg dia manome anao fahalalahana hisafidy fiankinan-doha tianao hapetraka ao anaty fonosana mimari-droa (izay tsy hitan'ny APT sy i Pacman).
Tsara ho fantatra ny fampisehoana ary betsaka. Tena be ny zava-drehetra. Mba hanomezana ohatra anao, ny Slackware 64bits misy ny birao XFCE dia mampiseho fanjifana RAM 245mb aorian'ny booty. Ao amin'ny OpenSuse na Fedora miaraka amin'ny birao iray ihany ny fanjifana manodidina ny 354mb (nanala ny fizotrany sasany hatramin'ny voalohany).
Etsy ankilany, tsy hanome soso-kevitra an'iza na iza aho hampiasa ny tahirinky ankehitriny, satria mahazatra be aorian'ny fanavaozana ny zavatra iray dia tsy mandeha aminao na tsy manomboka fotsiny ny rafitra. Ny fotoana farany nitrangan'izany tamiko dia nijanona tsy niasa ny GDM (tsy maintsy nampiasa Ctrl + high + F1 aho hanombohana ary hifindra amin'ny Slim), Gedit, Viewnior ary programa maro hafa.
Petercheco tsara, voalohany indrindra misaotra ny mpitari-dalana.
Ny famakiana tsikelikely ny zava-drehetra hitako fa misy dikany amin'ny dingana rehetra afa-tsy iray ihany:
Fa maninona no miankina amin'ny googlecode.com ity, no ahafahantsika mametraka dbopkg 0.37 avy amin'ny toerana ofisialy araka ny tranokalan'ny tetikasa?
Amin'ny fanaovana azy amin'ny fomba hafa, tsy tokony hataontsika lany daty ve ny ho avy?
Salama, mahaliana izay napetrakao fa ao amin'ny pejy ofisialy Slackware no misy an'ity:
Ao amin'ny repos ofisialin'ny distro dia tsy mivantana :).
Inona no zavatra mahaliana, ahoana no ahafahan'izy ireo tsy nametraka hadisoana goavana toy izany http://www.sbopkg.org/downloads.php?
Misaotra tamin'ny valiny haingana.
Nisy zavatra hafa holazaiko anao, na dia mino aza aho fa efa fantatro ny valiny. Ny iray amin'ireo antony nahatonga ahy hiala an'i Arch dia ny tsy nanaovany afa-tsy olana ara-piarovana na aiza na aiza, ary tsy tiako ny lasa manam-pahaizana momba ny fiarovana ny solosaina mba hahafahako manamboatra masontsivana sasany izay amin'ny fizarana hafa efa tonga hatrany amiko foana izy ireo.
Toy izany koa no mitranga amin'ny Slackware, heveriko fa tsy misy fepetra fiarovana manomboka amin'ny minitra 1, sa tsy izany?
Tsy maintsy ampiarinao ny tenanao.
Heveriko fa tsy tokony holavinao ny fidirana an-tsehatra toa ny ao amin'ny Arch, satria, ao amin'ilay installer Slackware iray ihany, dia manome anao ny toerana hametrahana ho azy ny SELinux ary na izany aza, tsy mandany loharano.
Mikasika ny Arch, ny nampatahotra ahy dia ny hafainganam-pandehan'izy ireo manavao ny kinova amin'ireo singa saro-pady indrindra azy ireo, tamin'ny ambaratonga iray izay nahatonga ahy hiverina tany amin'ny Three Marys fitoniana ao amin'ny GNU / Linux (Debian, Slackware ary RHEL / CentOS ).
Eny, Eliotime3000 dia efa namaly anao, fa araka ny hitanao amin'ny lahatsoratro dia mametraka mpanampy ho an'ny fikirakirana bebe kokoa koa aho: ufw. Io dia ahafahanao manampy masontsivana amin'ny firewall (netfiter na iptables ... izay tianao hiantsoana azy) amin'ny fomba haingana sy haingana be: D.
Ary koa, mba hahazoana fiarovana bebe kokoa, azonao atao ohatra ny mametraka fail2ban hiarovana ny solosainao amin'ny andrana ataon'ny ssh na serivisy hafa: D.
Te-handray an-tanana an'ity distro ity nandritra ny fotoana ela aho, saingy mieritreritra aho fa ny fametrahana ny fiankinan-doha amin'ny tanana dia mety ho lasa fahasosorana, na izany aza misaotra ny fampianarana, angamba indray andro any dia ho faly aho.
Tsisy olana. Jereo fa avy amin'ny rafitra mandeha ho azy aho mba hifehezana bebe kokoa ny rafitra sy ny fiankinan-doha 😀
Ny distro KISS tiako indrindra ... Raha ny marina dia io distro KISS tsara indrindra io no efa nanandramako hatrizay, satria manararaotra ny fampiasana roa binary (toy ny Debian sy ny hafa mampiasa slapt-get na slackpkg hapetraka amin'ny backports) na ny compilations toy ny Gentoo (sbopkg).
Na izany na tsy izany, distros toa Slackware, tsy misy, ary ny backports ofisialy (toy ny Slacky.eu) dia mahafantatra bebe kokoa ny bibikely ary manavao ny kinova azo antoka indrindra ary manitsy ny kaody loharano.
PS: mahatonga anao te-hisintona ny kaody loharano Iceweasel ary apetaho amin'ny sbopkg.
Marina tokoa: D. Etsy andaniny .. Inona no distro ampiasainao ankehitriny? Fantatro fa teo akaikin'ny Slackware, Debian ary Arch ianao fa ny iray amin'ireo nofidinao dia ny vinan'ny olona anyone
Raha te hilaza ny marina aho, ny distro tiako dia i Debian, satria manolotra fametrahana haingana sy mora ampiasaina sy ampifanarahana amiko (raha misy mankahala ny terminal, apetrako ny rindrambaiko afovoany raha birao GTK na Apper raha KDE).
Eo amin'ny sisin'ny Slackware dia avelako ho an'ny PC izay tsy manohana kernel miaraka amin'ny PAE toy ny Pentium IV taloha na PC izay zara raha mihazakazaka Windows XP.
Na izany na tsy izany, manantena aho fa ny rahalahiko afaka mamindra ny rakitra rehetra ao amin'ny PC-nao mba hametraka Slackware 14.1 ary noho izany, manohy mankafy XP amin'ny VirtualBox izy (tiany io raha vantany vao napetrako tao amin'ny kahie niaraka tamin'ny Windows 7 izy, satria miankina amin'ny amin'ny fisoratana anarana ho an'ny tompona programa PIC's and PLC's).
eliotime…. mamelà ny tsy fahalalako .. fa amin'ny malaina .. afaka mametraka fonosana .deb… ??????
izany dia noho ny mpamily mpanonta ahy ..
petercheco .. mpitari-dalana tsara hanaovana pirinty .. ary nampanao ahy hanandrana kamo ianao… feno fankasitrahana ..
Raha mampiasa ny mpanova fonosana Alien ianao, eny; fa raha te hampiasa slackpkg ianao hametahana fonosana .deb, tsia.
Tongasoa anao @patodx 😀
Somary tsy mitombina ahahaah
Nataon'i? Milaza aho fa be dia be nefa haingana ao anatin'izany ilay rindrambaiko izay ampiasainay indrindra 😀
Meh, farafaharatsiny mba tsy mametraka fonosana hafa ao aminao izay tsy tadiavinao izy.
Eny tokoa .. Aorian'ny safidin'ny tsirairay ny fonosana tiany hapetraka .. Tadiavo fotsiny ao amin'ny slackbuilds.org ary apetraho amin'ny baiko sbopkg-"package_name" (raha tsy misy fiankinan-doha) na sbopkg -ko "anarana_of_dépence package_name "hametraka fiankinan-doha + fonosana mihitsy) 😀
Nanandrana ny Slackware aho volana maro lasa izay rehefa nivoaka ny kinova 14.0, ny fametrahana azy dia tsy mitovy amin'ny fizarana hafa fa tsy dia sarotra noho ny olona sasany nandoko azy io ary nanome ahy fahatsapana filaminana (amin'ny ambaratonga fonosana ofisialy) izay fizarana vitsivitsy nomena ahy; Fa heveriko ho fahadisoana sy fandaniam-potoana tsy afaka apetrakao amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ny rafitra misy fototra indrindra na ny fananana kernel voatsara kokoa ary amin'izany dia mampihena ny fotoana fandefasana. Eny, maro aminareo no hilaza amiko fa afaka ataoko amin'ny tanana amin'ny fametrahana azy io, saingy io indrindra no tsikeraiko: manapa-kevitra amin'ny fonosana maherin'ny 100 raha hametraka azy aho na tsia.
Raha ny mahazatra, ny Slackware installer dia hampiseho aminao ny lisitry ny vondrona fonosana tianao hapetraka (manomboka amin'ny fototra indrindra ka hatramin'ny faran'izay kely indrindra, toy ny fonosan'ny lalao KDE), fa raha ny tena marina dia miankina amin'ny rafitra ilay bootnel. boot izay mitovy amin'ny UNIX / BSD (raha ny marina, ny OpenBSD dia maharitra mandrakizay amin'ny mpandefa zana-tsipìka).
Tsy afaka hanaiky bebe kokoa aho .. Azonao atao ny mametraka ireo vondrona rindrambaiko A, AP, D, F, K, L, N, X ary efa manana rafitra fototra ianao aorian'ny famerenanao azy dia apetrakao izay tianao: D.
Bebe kokoa momba ity: http://www.slackwiki.com/Minimal_System
Tsara ny tondrozotra, na dia mahita ny faharetany aza aho dia heveriko fa mpampiasa Arch kokoa aho. Zavatra iray mahagaga ahy ihany koa ny fanananao lesoka tsipelina maro (indrindra ireo verbe tsotra tsy misy accent). Heveriko fa zavatra izay nalaina maimaimpoana foana izany fa ny pejy misy kalitao dia tokony hahita ireo lesoka ireo. Manantena aho fa avy amin'ny Linux dia manao ezaka bebe kokoa amin'izany izy ireo.
@Petercheco dia avy amin'ny Repoblika Tseky, noho izany tsy azonao atao ny manome tsiny azy toy izany noho ny fananany tsipelina ratsy toa izany (raha ny marina, indraindray ny manoratra amin'ny fiteny roa na mihoatra dia mahasosotra).
Na izany na tsy izany, ity lahatsoratra ity dia feno kokoa noho ny ahy, mendrika doka fanampiny izy io.
Mpampiasa Debian aho saingy nanandrana nanao virtoaly saika ny fizarana rehetra, farafaharatsiny ny voalohany rehetra izay niavian'ny ambiny. Anisan'izany, ny Slackware no tena tiako indrindra, ny fiasan'ny slackbuilds amin'ny voalohany dia mety ho sarotra nefa tsy mihoatra ny Fampiasana AUR ao amin'ny ArchLinux.
Slackware toa an'i Debian dia miorina amin'ny fitoniana amin'ny ankapobeny na tsy izy na tsia ilay kinova farany raha tsy misy bug, noho izany dia io no fizarana mbola mampiasa Lilo fa tsy grub amin'ny bootloader.
Toa fizarana tena tsara ho ahy izany, raha 'nandeha' avy tany Debian aho dia nianjera tany amin'ireo tambajotra Slackware, satria ny Gentoo dia sarotra kokoa ny mampiasa azy.
Eny, marina fa hanana tsipelina diso hafa aho, saingy izany no mitranga rehefa manoratra lahatsoratra amin'ny 12:XNUMX alina any amin'ny Repoblika Tseky ny iray: D. Ho fanampin'izany, tsy maintsy raisina fa ny mpandahateny espaniola ihany no manao fahadisoana amin'ny tsipelina: D.
Manaiky aho. Oi en dya ny vahoaka tsy manoratra vien, zon hunos berdaderos hanimales an'ny lenhua casteyana.
Mihevitra aho fa tokony hanoratra amin'ny fiteny Czech manomboka izao i Petercheco, amin'izay dia ho azontsika tsara ny dikan'ny namantsika ao amin'ireo lesona, satria tsy ny fitenin-drazany ny Espaniola.
Ny hevitrao no nahafaly ny tolakandroko tany am-piasana: D. Misaotra anao :). Matotra aho raha miteny hoe, nihomehy folo minitra aho diez
TOKONY IRAY IHANY ..
Hos aho dia manome soso-kevitra amin'ny ampahany amin'ny fikirakirana tahiry mba tsy hampisy ny repos an'ny:
Ireo dia miseho voalohany ao amin'ny antontan-taratasy: D. Raha sanatria ka tsy mahomby ny tahiry fitahirizam-bokin'ireo firenena mifanandrify aminy.
Miala tsiny "Manoro hevitra anao aho"
Manaiky tanteraka an'ity lahatsoratra Slackware ity aho, saingy, nisedra olana aho rehefa nanamboatra ny tamba-jotra Lan, tsy nahita na aiza na aiza aho, ny vahaolana amin'ny olan'ny tambajotranoko, noho izany, niverina tany amin'ny openuse aho, izay manamora ny fanahafana ny Lan. Miarahaba ireo izay te hanana fotoana hianarana aho, saingy amin'ny maha-mpampiasa mitady vahaolana haingana dia tsy nahita Slackware aho.
Mandritra ny fizotry ny fametrahana dia manontany ny mpanamboatra raha te-hikirakira ny tambajotra ianao. Milaza ianao ary avy eo misafidy ny safidin'ny Network Manager. Mitandrema, misy safidy efatra ary ny iray amin'izany dia DHCP. Aza mifidy DHCP raha tsy Network Manager. Voavaha ny olana satria ho tantanan'ny Network Manager connections ny fifandraisana misy anao
Fampahalalana bebe kokoa, izay mety hahaliana anao:
santilin dia hoy izy:
Nametraka slackware amin'ny Nec Versa M320 aho ary nanaraka ny torolalana nomeko, indrindra ny sbopkg -i "kcm_touchpad" fa tsy mandeha ny touchpad-ko.
Nijery ny manodidina aho fa tsy nahita vahaolana ho an'ny malaina 14.1.
Mila manitsy ny fisie x11 fikirakira tanana ve aho?
Mamaly an'i santilin
Salama, rehefa apetrakao ity fonosana ity dia ho hitanao ny safidy hanamboarana ny touchpad anao amin'ny safidin'ny rafitra KDE -> fitaovana fampidirana -> touchpad.
Eto no amboarinao amin'ny zavatra ilainao: D.
Raha tsy mampiasa KDE ianao dia mampiasa XFCE, mankanesa any afovoany xfce -> totozy ary touchpad ary ataovy ny toerana tadiavina :).
Ny rafitra dia tsy mahita ny touchpad-ko. Rehefa miditra ny fikirakirana touchpad avy amin'ny kde aho, amin'ny fampahalalana dia milaza amiko ny anaran'ny Touchpad: Tsy hita ny fitaovana
Tena liana amin'ny tranga misy anao .. Ny touchpad dia tsy mandeha tanteraka sa miasa antsasany? Ahoana no nametrahanao ny rafitra?
Tsy misy miasa mihitsy. Ny fametrahana dia natao tamin'ny fanarahana an'ity torolàlana ity.
Fantatrao ve ny tokony hatao hijerena raha mameno ny touchpad ny kernel?
Saingy tsy niresaka momba ny fametrahana aho .. Ny lahatsoratro dia ny fametrahana aorian'ny fametrahana: D.
Mety tsy tohanana ny touchpad-nao, fa ity no vao hitako :). Raha nametraka vondrona X X ianao nandritra ny fametrahana azy dia tokony handeha tsara ny touchpad-nao.
Ao amin'ny fametrahana Slacware dia miseho ny fotoana iray izay anontaniany anao ny totozy tianao hampiasaina. Tsy maintsy misafidy ny default Vídně: imps2mouse ianao.
Raha te hanao fanahafana amin'ny tanana ianao dia tsy maintsy manitsy na mamorona ilay rakitra /usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
vatovary dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara, tsy nampiasa slackware nandritra ny taona maro aho, tamin'ity fizarana ity dia natomboka tao amin'ny GNU / Linux miaraka amin'ny kinova 10, nilaozako efa ela izany satria talohan'ny nila nametraka ny zava-drehetra tamin'ny tanana ary tokony nitady ny fiankinan-doha tsirairay aho. , fa hoy aho hanandrana azy indray, Misaotra ny Guide
Valio amin'i arenita
Lahatsoratra tena tsara; arakaraka ny ahatongavanao sy ny tsara kokoa dia azonao atao foana ny mianatra toe-javatra izay mety tsy ao anaty fampianarana hafa ary ny mifamadika amin'izany.
Ny zavatra misongadina ao amin'ny Slackware dia ny fampidirana ny KDE sy ny fiasan'ny fampiharana, ary eny, tsikaritro ihany koa fa somary mailaka noho ny Archlinux.
Ny seho an-tsehatra, azoko atao ny mametraka anao amin'ny fanontaniana, ary ny momba an'i Gentoo?.
Homeko anao ny iray amin'ny CentOS-ko miaraka amin'ny kernel custom vs Slackware miaraka amin'ny kernel stock ... andao jerena ny ram, ny hafainganana ary ny fahamendrehana manohitra ny adin-tsaina CPU izay mahazo tombony bebe kokoa 🙂
Mametraha milina virtoaly roa .. Ny iray manana CentOS farafahakeliny miaraka amin'ny kernel anao ary ny iray hafa manana Slackware kely (apetraho ireo vondrona rindrambaiko mba hametrahana Slackware kely kely: http://www.slackwiki.com/Minimal_System) ary apetaho ny valiny 😀
lahatsoratra tena tsara, arahaba soa, efa naniry ny hitsapa ity distro ity aho, ary vitanao ny nampidina ahy avy hatrany ny ISO.
Fanontaniana kely fotsiny dia hapetrako ao amin'ny masinina fanandramako, izay ametrahana distros maro hafa, Debian Jessie, Arch, Ubuntu 14.04, OpenSuse, KaOs, Trsiquel, ary avy amin'ny GRUB2 daholo izy ireo. Hitako fa ao amin'ny lahatsoratranao dia miresaka momba an'i Lilo ianao (firy taona izany?).
Ny fanontaniana dia hoe, afaka misafidy ny hametraka GRUB2 ve aho fa tsy lilo ary hanaiky ny distros hafa efa napetrakao ve?
Salama Essaú ary misaotra anao tamin'ny hevitrao: D. Mandritra ny fametrahana ny rafitra dia mametraka an'i Lilo ho azy.
Azonao atao ny mametraka grub (grub2) izay tonga ao amin'ny Slackware DVD miaraka amin'ireto dingana manaraka ireto:
Vantany vao vita ny fametrahana Slackware dia miseho ity hafatra ity: "Vita ny fametrahana Linux Slackware."
Ary voila: D .. Fampahalalana bebe kokoa momba an'io:
Zavatra iray hafa ...
Tsy tetikasa nilaozana mihitsy i Lilo. Navoaka herintaona lasa izay (7 Jona 2013) ny kinova farany farany ary androany dia manana ny fanohanan'ny UEFI miaraka amin'i Lilo i Slackware.
Fampahalalana bebe kokoa: http://en.wikipedia.org/wiki/LILO_%28boot_loader%29
mpitari-dalana tena tsara Peter.
Etsy andaniny, volana maro taty aoriana dia manenina izy fa miadana ary miverina any rhel, na eo aza izany centos izany fa amin'ny 7 😛
Misaotra: D. Eny, mibitsibitsika amin'ny rivotra i hoigo hoy izy ireo fa mijanona amin'ny Slackware aho, satria tiako be io ary eo am-pelatanako ny zava-drehetra :). Ho fanampin'izany, masiaka ny zava-bita ary hadinoko ny trano fitehirizana miampy ny fametrahana ireo laharam-pahamehana, fonosana deb na rpm ary ny fiankinan'izy ireo: D. Miaraka amin'ilay reny Slackware dia mahatsiaro ho afaka aho ary mihamaro hatrany ny zavatra fantatro amin'ny eritreritr'i Patrick Volkerding momba ny linux anio.
Mety izany ary ny fanohanana ananana dia tsy manam-paharoa:
Fanontaniana iray: azoko atao ve ny mametraka birao roa na maromaro? Ohatra, manomboka anio amin'ny KDE, rahampitso amin'ny XFCE ary amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ny Kanelina.
Salama, mazava ho azy fa afaka manana script maromaro ianao .. Mazava ho azy fa tsy maintsy manangona ny kanelina: D.
Fampahalalana bebe kokoa eto: http://slackblogs.blogspot.cz/2014/04/cinnamon-slackbuilds-csb-for-slackware.html
Fampianarana tena tsara, nampiasa Slackware aho nanomboka tamin'ny taona 1998 ary mbola tsy nanana olana tamin'ny mpizara mihitsy aho, amin'izy ireo dia tsy mametraka fonosana avy amin'ny slackbuilds satria efa ampy ny fonosana izay ao amin'ny tahiry ofisialy. Ao an-tranoko dia ampiasaiko ihany koa ary amin'ity tranga ity raha mampiasa slackbuilds ho an'ny fonosana toy ny vlc aho, na dia mampiasa tsy tapaka aza aho ./configure && make & make install ankoatry ny hafa.
Miarahaba anao indray amin'ity fampianarana ity sy ny safidy nataonao!
Misaotra betsaka Oscar, faly koa aho fa nandray fanapahan-kevitra hampiasa Slackware. 🙂
Wow, tokony ho mpijirika ianao :).
Rehefa manavao avy amin'ny slackware mankany amin'ny kinova hafa ianao dia mametaka indray ve sa manavao?
Azonao atao ny manatsara tsy misy olana amin'ny:
1 ° Ampio ny repo an'ny kinova vaovao amin'ny / etc / slackpkg / fitaratra
Fanavaozana faha-2 miaraka amin'ny:
Safidio ny litera K hitehirizana ny fikirana fa jereo ny fikirakirana vaovao an'ireo fonosana
3-slackpkg fametrahana vaovao
Mazava ho azy, aleoko manao fametrahana madio satria miasa tsara ny Slackware ary tsy ilaina ny manavao isaky ny roa isaky ny telo isaky ny dikanteny version
amilkar dia hoy izy:
Slackware, tsara, mianatra be aho!
Ny fangatahana, rehefa manova /etc/profile.d/lang.sh dia apetrako:
fanondranana LANG = es_XX.utf8
fanondranana LANGUAGE = es_XX.utf8
fanondranana LINGUAS = es_XX.utf8
fanondranana LC_ALL = es_XX.utf8
XX: firenena mifanitsy
Nety tsara izany
Ny klavier no olana, tsy mila fitendry amerikana latina na espaniôla (hitanao fa tsy mahay manoratra aho), nisafidy olpc / es-olpc | olpc / es-olpc.map izay namaly ny ora fametrahana, dia tsia. Azo amboarina amin'ny slackbuilds ve izy io? Inona no nila nofaritako tamin'ny fametrahana? Inona no tsy maintsy ovako? Miarahaba.
Mamaly an'i amilkar
Andramo manokatra ny terminal fa tsy miorim-paka (izany hoe amin'ny anaranao) ary manorata:
Fampahalalana bebe kokoa: http://docs.slackware.com/howtos:window_managers:keyboard_layout
Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny manamboatra ny fitendry mivantana amin'ny tontolon'ny birao ampiasanao.
Nilaza ianao fa nametraka /etc/profile.d/lang.sh, fa nametraka /etc/profile.d/lang.csh koa ianao?
fanondranana LANG = es_ES.utf8
Tena ilaina: 3
ANIM4 dia hoy izy:
Miarahaba anao noho ity fandraisana anjara ho an'ny fiaraha-monina mangatsiaka Petercheco ity.
Izaho dia mpampiasa slackware hatramin'ny slackware 13 ary ny tena marina dia io no zavatra tsara indrindra nananako tamin'ny kapila mafy nataoko, nanandrana ny hafa aho fa niverina tany amin'ny slackware foana (Gentoo tadiaviko) ary izao no hany zavatra tiako mieritreritra momba ny milamina sa ankehitriny?
Ny hany zavatra hitako tsy hita dia ny vondron'olona miteny Espaniôla ao amin'ny irc ohatra na forum iray mavitrika tsara izay mandray anjara betsaka. Mba hamahana ny fisalasalan'ny tsirairay dia mila mianatra daholo isika ary tsy maninona ny tsy mety 100 heny, ka tsy hatahotra ny olona intsony io distro Gnu / linux mahafinaritra io.
Mitranga amiko izany rehefa hitako fa manararaotra miarahaba ny mpanoratra sy ity lahatsoratra ity ny olona ary amin'ny alàlan'ny fametrahan'izy ireo fisalasalana, tsara kokoa ny manana toerana hahafahantsika rehetra mizara ny zavatra niainantsika sy mianatra bebe kokoa fa tsy mila. manipy betsaka amin'ny (fanontaniana linux).
Ambony lavitra kokoa aza ny olona iray nanontany hoe maninona no tsy nampiana ny sbopkg na slackpkg, tsotra ny valiny, fonosana tsy voatery izy ireo noho izany manimba ny filozofia KISS noho ny antony tsy itovizan'ny slackware64 amin'ny 32bits, "vonona" izy fa manana ianao hanisy sosona rindrambaiko handefasana / hanangonana rindrambaiko 32-bit.
Ary nisy mpampiasa iray hafa nanontany ny fomba fanovana azy amin'ny kde ho amin'ny tontolo hafa, satria araka ny nolazain'i Petercheco fa manangona izy dia avy eo mihazakazaka amin'ny terminal ianao: $ xwmconfig
Ary miseho ny menio izay ahafahanao misafidy ilay tadiavinao (napetraka teo aloha). Avy eo dia vonoinay ny X, $ startx manaraka ary izay ihany.
Valiny amin'i ANIM4
Misaotra betsaka anao nanome ny valinteninao sy ny fanombanana ny lahatsoratro ary manaiky aho fa mila tranokala miteny espaniola bebe kokoa momba ny Slackware: D.
Tongasoa anao Petercheco, raha mampalahelo ny mahita fa tsy misy olona ao amin'ny # slackware-es de freenode, afaka mamorona fantsona hafa ianao, toa ny Slackeros na Slackos na anarana hafa, ny fahasarotan'ireto fantsona irc ireto dia ny fitazonana azy ireo mavitrika ary miaraka amin'ny mpampiasa maro ....
Ery ambony no apetrako * Slackpkg ary midika hoe slapt-get 🙂 satria tafiditra ao ny slackpkg.
Miarahaba ary manohy manome tehina amin'ny slackware mandritra ny taona maro!
Salama Petercheco 🙂
Tiako ity lahatsoratra ity amin'ny zavatra tokony hatao aorian'ny fametrahana Slackware. Tena mety ho an'izay rehetra maniry ny hanandrana sy hitsapa ny OS * Linux.
Slackware no nampiasako nanomboka tamin'ny taona 1994. Manana Slack vonona handeha foana aho; amin'izao fotoana izao dia Slackware 14.1.
Na izany aza, efa amam-bolana no tsy nampiasako azy satria ny fanohanana ny karatra "nVidia Optimus" dia tsy matotra loatra satria mila Slack aho.
Mila mametraka ny fonosana "bumblebbe sy bbswitch" aho mba ho tapaka ny karatra nVidia; hatramin'ny ankabeazan'ny fotoana dia nijanona tamin'ny Intel tafiditra ao amin'ny i7 aho.
Noho ny lahatsoratro dia nahatadidy zavatra iray izay tsy noheveriko tamin'ny fotoana farany nanandramako nametraka ireto fonosana ireto: "ny tsy fifanarahana amin'ny 32 bit !!"
Vao nanao fikarohana aho ary nahita an'ity HOWTO ity izay manazava ny fomba fametrahana ny fanohanana ny karatra nVidia Optimus miaraka amin'ireo mpamily nVidia; fa ... mbola ilaina ihany ny fanovana ny rafitra ho "multilib"; ary io no tsy tsapako!
Raha manana Slackware Linux 64 bit madio aho; satria tiako ho toy izany. Toa tsy mety amiko ny manampy ny sosona mifanaraka amin'ny 32-bit.
Fantatro fa ny olana fototra dia ny tsy nanoloran'ny nVidia fanohanana sahaza ho an'ireo karatra sary amin'ny tontolo GNU / Linux.
Tsy maintsy miandry karazana fanohanana aho, eny fa na ny ivelany aza, mamela ny fametrahana an'ity rindrambaiko ity nefa tsy manao rafitra "multilib".
Misaotra nampatsiahy ahy 🙂 Tsy mbola nanomboka Slack nandritra ny volana maro aho satria miaraka amin'ny Linux Mint 17 dia efa miasa ny fanohanana ny nVidia Optimos (miaraka amin'ireo mpamily Noveau) avy amin'ny fametrahana ary mahazo aina tokoa ka miafara manadino izay niaviany: - /
Pejy tena tsara!
Mihamaro ny mpampiasa faly amin'ny Slackware !!! 🙂
Mety ho tsara kokoa ny sarinao raha amin'ny mpitantana varavarankely toa ny Enlightenment 16 😀
Misaotra betsaka anao namana… Nitsambikina avy eo amin'ny distro mankany distro aho nandritra ny fotoana fohy, fa niverina tany amin'ny Slackware niaraka tamin'ny KDE aho. Mazava ho azy, Slackware Current amin'ity indray mitoraka ity ary mieritreritra aho fa ny Slackware 14.2 na 15 dia ho hitantsika, toa efa ho karamel io: D.
WSN dia hoy izy:
Lahatsoratra petercheco tena tsara!
Tsy mbola nampiasa an'io distro io aho mandraka androany, nifidy ny hafa foana aho tamin'ny alàlan'ny installer graphique sy ny finamanana kokoa momba ny tetezamita eo anelanelan'ny windows sy Gnu / Linux, saingy gaga aho amin'ny zava-bitan'ny Slackware, mbola mila manamboatra sasantsasany aho zavatra manan-danja toy ny klavier sy zavatra hafa, saingy tsy dia sarotra izany.
Ny hany mampalahelo ahy dia hoe ela loatra vao nanandrana ity sangan'asa ity.
Miarahaba sy miarahaba anao noho ilay lahatsoratra mahafinaritra, fanampiana lehibe tokoa izany.
Valiny amin'i WSN
Salama namana ary misaotra betsaka noho ny naoty tsara tamin'ny lahatsoratro :). Faly mahita fa mahasoa ho an'ny mpampiasa :). Miarahaba ary mankafy ny distro ...
MIARAHA SADY NAMANA AKAIKY VAO Vaovao aho raha afaka manampy ahy mampiditra jiro… MBA MISAOTRA ANAO
Valiny amin'i ADRIAN
Manampy anao ity: http://www.slackware.com/~mrgoblin/slackware-lamp.php
antares_alf dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao Peter.
Nanoratra lahatsoratra tsara ho an'ireo vaovao amin'ny slackware ianao. Nanompo ahy be dia be koa izy io ary nampiasa ny distro hatramin'ny 2008 aho.
Ny zavatra lehibe amin'ny slackware dia tsy miova firy raha tsy hoe ilaina izany. Ankehitriny misy famotsorana vaovao, slackware 14.2. Miandry poste recharge vaovao ve isika?
Mamaly an'i antares_alf
Vikrand dia hoy izy:
Misaotra an'ity lahatsoratra ity, nanampy ahy tsy azonao an-tsaina izany.
Vaovao aho amin'ity distro ity, novakiako tao amin'ny LinuxQuestion fa azo apetraka ao amin'ny Slackware 5 ny KDE Plasma 14.2.
Ny tsy azoko dia ny fomba hametrahako azy?
Ahoana no fomba fampiasako ny trano fitahirizana AlienBob?
Mamaly an'i Vikrand
Sendra tonga teto aho, ity tutorial ity dia nanampy ahy betsaka satria te hanandrana Slackware aho.
Mandraka androany dia mbola apetrakao ao amin'ny PC birao tsy misy fatiantoka, tsy miovaova, pass iray. Ary amin'izao fotoana izao dia apetrako fotsiny amin'ny solosainako hivoahana lalindalina kokoa amin'ny tontolon'ny linux indrindra (Slackware / Zenwalk)
Marina fa tamin'ny voalohany dia mafy, zavatra toy ny tamin'ny nandehanako avy tamin'ny windows ka hatramin'ny ubuntu / linuxmint ... hahaha. Tsy maintsy nanao fikarohana be dia be tamin'ny linux aho.
Efa nanandrana distro maro aho, fa ity ho ahy no mampifanaraka ny fianarako amin'ny linux. Mbola manana iray hafa aho avy amin'ilay sekoly taloha dia ny Freebsd.
Misy mahay manao fizarana Slackware manokana? Dinihiko ny liveslak fa tsy haiko hoe inona no baiko ..
Taorian'ny fizahan-toetra sy hadisoana nandritra ny 12 taona tamin'ny fizarana isan-karazany, linux, bsd, windows, osx, hitako ny rafitra miasa ho ahy, manala fitaovam-piasan'ny mpanjifa foana aho, manamboatra rafitra, manatsara, manandrana, mila zavatra milamina aho, tadiaviko ny andro faharoan'ny slackware Ary mianatra, dia nanomboka tamin'ny wifislax izay hitako haingana be rehefa nijery aho fa hitako fa mifototra amin'ny slackware ... dia namaky ny hevitry ny mpampiasa ny ambaratonga rehetra sy ny zavatra niainany aho ... nahatsapa adrenaline aho tapitra ny fikarohana.
forum tsara indrindra avelako ho farany,
Ampiasao ny Hery, Lukas!
Famerenana lohahevitra mahazatra: Miverina amin'ny interface Firefox mahazatra